गहुँबाट बन्ने आटा राम्रो, मैदा किन हानीकारक ? यी हुन् भित्री कारण - ज्ञानविज्ञान
एउटा ठट्यौली छ, ‘रेष्टुरेन्टको मेनु जति हरेेपनि आखिरमा हामीले माग्ने खानेकुरा भनेको मम र चाउमिन हो ।’
खाद्य बजारले पनि करिब यस्तै नतिजा देखाउँछ, खासगरी शहरी क्षेत्रमा । तपाईं चोक-गल्ली जतापनि मम, चाउमिन फेला पार्नुहुन्छ । हाम्रो पि्रय खान्की हुन् यी । जबकी दुबै मैदाजन्य परिकार हुन् । मम र चाउमिन मात्र होइन, अधिकांश फास्टफूड र बजारमा पाइने बिस्कुट, चाउचाउ, चिप्स मैदाले बनेका हुन् । मैदा, चिनी, नुन आदिको मिश्रणबाट यी खानेकुरा तयार भएका हुन् ।
हामीले दैनिक जसो मिठो मानेर खाने यी मैदाजन्य खाद्यपदार्थ शारीरिक स्वास्थ्यका लागि भने अत्यान्तै हानिकारक हुन् । स्वास्थ्य विज्ञानले यसै भन्छ । त्यही कारण स्वस्थ्य जीवन यापनका लागि मैदाजन्य खानेकुरा बर्जित गरिएको छ ।
बजारमा पाइनेजति सबै मिठा खानेकुरा मैदाबाट बनेका छन् । भोक लाग्दा छिटो-छरितो उपलब्ध हुने कुरा पनि यिनै हुन् । त्यसो भए यी खानेकुरा खानै हुन्न ? मैदाजन्य खानेकुरा सेवन गर्दा के हानी हुन्छ ?
जबकी मैदा र आटा दुबै गहुँबाट बन्छ । आटा सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ । तर, त्यही गहुँबाट बनेको मैदा किन हानिकारक ?
किन हानिकारक मैदा ?
तपाईं, हामी सोच्छौं, आटा पनि गहुँ पिसेर बनाइन्छ । मैदा पनि गहुँ पिसेर नै बनाइन्छ । तब आटा फाइदाजनक हुन्छ, मैदा किन हानिकारक ?
सही हो, आटा र मैदा दुबै गहुँबाट बन्ने हो । तर, यी दुबै बन्ने प्रक्रिया फरक छ । आटा बनाउँदा गहुँको पहेंलो भाग अर्थात माथिल्लो पत्र (बोक्रा) उप्काइदैन । यही पत्र फाइबरको एकदम राम्रो स्रोत हो । त्यसैगरी आटालाई खस्रो पिसिन्छ । यसले गर्दा गहुँमा रहेको पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ।
अब मैदा कसरी बनाइन्छ त ?
मैदा बन्ने प्रक्रिया फरक छ । मैदा बनाउँदा गहुँको माथिल्लो पत्र (बोक्रा) उप्काइन्छ । बाँकी रहेको सेतो भागलाई एकदम मिहिन ढंगले पिसिन्छ । यही कारण मैदामा कुनै पोषक तत्व बाँकी रहँदैन साथै फाइबर पनि ।
रसायनले मैदा सेतो
तपाईं/हामीले देखेका छौं, गहुँको सेतो भाग कस्तो हुन्छ ? पक्कैपनि मैदा जति निख्खर सेतो हुँदैन । मैदा चहकिलो सेतो रंगको हुन्छ, जुन गहुँ हुँदैन । त्यसैले मैदालाई सेतो बनाउनका लागि रसायन मिश्रण गरिन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ ।
क्याल्शियम परअक्साइड, क्लोरिन, क्लोरिन डाइ अक्साइड अदि जस्ता रसायन प्रयोग गरेर मैदालाई सेतो बनाइन्छ । यी रसायनले हाम्रो शरीरमा एकदम हानी गर्छ ।
आन्द्रामा टाँसिएर रहन्छ
मैदा चिप्लो र मिहिन हुन्छ । साथै यसमा फाइबर पटक्कै हुँदैन । त्यही कारण मैदाजन्य परिकार खाएपछि त्यसलाई हाम्रो पाचन यन्त्रले पचाउन सक्दैन । जब हामी मैदाजन्य परिकार सेवन गर्छाै, त्यो आन्द्रामा टाँसिएर बस्छ । यसले आन्द्रालाई दुषित बनाउँछ । यही कारण पेटको गडबडी एवं अन्य रोग लाग्छ । मैदाले कब्जियतको समस्या पनि निम्त्याउँछ ।
कोलोस्टोर र मोटोपन बढाउँछ
मैदामा स्टार्चको मात्रा एकदम बढी हुन्छ । त्यसैले मैदाजन्य खानेकुरा सेवन गर्दा मोटोपन बढ्छ । अहिलेका पुस्तामा अक्सर मोटोपनको समस्या छ । किनभने उनीहरु दैनिक भोजनमा मैदाजन्य खानेकुरा सेवन गरिरहेका छन् ।
त्यती मात्र होइन, मैदाले कोलोस्टोर र रगतमा ट्राइग्लीसराइडको स्तर पनि बढाएको छ । साथै मैदामा अत्याधिक मात्रामा ग्लूटन पनि पाइन्छ ।
मैदा खानसाथ तुरुन्तै तपाईं/हाम्रो शरीरमा देखिने प्रतिक्रिया हो, सुगर लेभल । मैदा सेवन गर्नसाथ हाम्रो शरीरको शुगर लेभल बढ्छ । किनभने यसमा उच्च ग्लाइसेमिक इन्डेक्स हुन्छ । त्यही कारण मैदाजन्य परिकार मधुमेहको कारण बन्न सक्छ ।
हामीले मैदा सम्बन्धि थप केहि जानकारी दिइएका छाै
मैदाको रोटी र पास्ताजस्ता खानेकुरामा पाइने ग्लुटेन -खानेकुरामा पाइने प्रोटिनको समूहले मानिसहरुमा मानसिक समस्या पनि निम्त्याउने पत्ता लागेको छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार केही मानिसहरुमा मैदाको रोटी र पास्ता खाएपछि त्यसमा रहेको ग्लुटेन नामको तत्वले मानसिक स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या ल्याउँछ ।
सेलिएक समस्या (सजिलै खानेकुरा नपच्ने) का कारण मानिसहरु साँच्चै नै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा धेरै रुचाउँदैनन् । करिब १ प्रतिशत मानिसमा यो समस्या हुन्छ । तर, यो भन्दा धेरै करिब १२ प्रतिशत मानिसहरुलाई भने ग्लुटेनले समस्या पार्छ जसले पेट फुल्ने र वान्ता हुने गर्छ ।
नन सेलिएक ग्लुटेन संवेदनशीलता साँच्चै हुन्छ वा मष्तिस्कमा मात्रै हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न शोधकर्ताहरुले ब्लाइन्ड फुड टेस्ट गरे र ती मानिसहरुको लक्षणहरुको परीक्षण गरे ।
यो प्रक्रियाबाट उनीहरुले केही मानिसहरुलाई उच्च ग्लुटेनको सेवन पछि वास्तविक रुपमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु देखिएको पाए । उक्त अध्ययन मेलबर्न अष्ट्रेलियाका ला ट्रोब विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले गरेका थिए ।
धेरै सातासम्म १४ जना सहभागीहरुलाई ग्लुटेन भएको र नभएको दुवैथरी दही र मफिन दिइएको थियो । तर, सहभागीहरुलाई कुनमा ग्लुटेन छ र कुनमा छैन भन्ने थाहा दिइएको थिएन ।
दुवै खालको खानेकुरा खाएपछि सहभागीहरुले भने उनीहरुलाई समान स्तरको पेट फुल्ने र बाउँडिने समस्या भएको बताए र त्यसले त्यो ग्लुटेन सेन्सिटिभिटी भन्दा अन्य चीजको कारणले भएको थाहा भयो ।
न्यू साइन्टिस्टका अनुसार विज्ञहरुले पेट फुल्ने र बाँउडिने कारण फ्लुक्टान भनिने कार्वोहाइड्रेटको कारणले वा ग्लुटेनकोे डरको कारणले भएको हुनसक्ने बताएका छन्।
तर, उनीहरुले अध्ययनबाट जब मानिसहरुले ग्लुटेन खान्छन् त्यसपछि उनीहरु थकित जस्तो देखिने र उनीहरुमा सकारात्मक भावनाहरुको अनुभव कम हुने पत्ता लगाए । यसले ग्लुटेनले साँच्चै मानिसको मष्तिस्कमा असर गर्ने देखाउँछ ।
शोधको नेतृत्व गरेकी डा. जेसिका बिसेइकिरेस्कीले भनिन्, ‘हामीले ग्लुटेन खानसाथै सबैलाई निश्चत रुपमा निराश बनाउँछ भनेका छैनौं । यसले थोरै संख्याका मानिसहरुलाई मात्रै असर गर्छ ।’
‘तर, मानिसहरुलाई ग्लुटेन नभएको खानेकुरा खाएपछि राम्रो महसुस भयो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ’ उनले भनिन् ।
उनको अध्ययनले पत्ता लगाएको तथ्यहरु एक अर्को पुरानो अध्ययनसँग मिल्दोजुल्दो छ जसले प्रोटिन सेन्सेटिभ भन्दा धेरै ग्लुटेन सेन्सेटिभ मानिसहरुमा निराशाको लक्षणहरु धेरै देखापर्ने पत्ता लगाएको थियो ।
सन् २०१५ मा इटालीमा गरिएको अध्ययनले ग्लुटेन संवेदनशील मानिसहरुमा ग्लुटेनको सेवनपछि निराशामा बढाउने र ब्रेन फगिनेस हुने तथ्य पत्ता लगाएको थियो ।
अष्ट्रेलियाको न्युक्यासल विश्वविद्यालयका शोधकर्ता माइकल पोट्टर भन्छन्, ‘यी अध्ययनहरुले साँच्चै नै यस्ता मानिसहरुलाई ग्लुटेनको कारणले मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने र उनीहरुलाई विभिन्न अध्यारो चुनौतीहरु आइपर्ने देखाउँछ ।’
आजकाल मसल्स बनाउन र तौल कम गर्ने डाइट प्लानमा मानिसहरु प्रोटिन सप्लिमेन्टको रुपमा खानामा सोयाबीन समावेश गर्ने गर्छन् । यसलाई दैनिक खाने पनि गर्छन् । सोयाबीनमा दुध, अण्डा र मासुमा भन्दा धेरै प्रोटिन पाइन्छ ।
तर एमिनो एसिड, क्याल्सियम र फाइबरले भरपुर सोयाबीन थुप्रैका लागि हानिकारक पनि हुनसक्छ । हाइपरटेन्शनदेखि मृगौलासम्मको रोगलाई यसले थप वृद्धि गर्नसक्छ ।
भारतकी डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट ज्योती शर्माका अनुसार सोयाबीनबाट हुने एलर्जी गहुँका उत्पादन (ग्लूटेनको एलर्जी) बाट हुने एलर्जीको तुलनामा धेरै हुन्छ । केही रोग भएका व्यक्तिले यसको सेवन गरे थप समस्या निम्त्याउन सक्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔं
यदि तपाईंलाई कुनै प्रकारको मुटु रोग छ भने सोयाबीन नखानुहोस् । अनुसन्धानका अनुसार यसमा ट्रान्स फ्याट कम हुन्छ जुन मुटुका लागि राम्रो मानिँदैन । यसले हाइपरटेन्सन बढाउने काम पनि गर्दछ ।
डा. शर्माका अनुसार सोयाबीनमा एमिनो एसिड हुन्छ जसले शिशुको विकास रोक्ने काम गर्दछ । त्यसकारण गर्भवती महिलाले यसको सेवन गर्नुहुँदैन ।
मृगौलाको समस्या हुँदा
मृगौलाको काम प्रोटिनलाई फिल्टर गर्नु पनि हो र सोयाबीनमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । यस्तोमा जुन व्यत्तिलाई मृगौलासम्बन्धि रोग छ उनीहरुले सोयाबीन निकै कम मात्रामा खानुपर्छ ।
सोयाबीनमा पाइने केही एमिनो एसिडले हर्मोनलाई प्रभावित गर्दछ । सोयाबीन थाइराइडसँग जोडिएको थाइरोक्सिन हर्मोनलाई कम वा वृद्धि गर्छ । यसले थाइराइडलाई बढाउने गर्दछ । त्यसकारण थाइराइडका बिरामीले सोयाबीनबाट टाढै रहनुपर्छ ।
सोयाबीन खानुका फाइदा पनि छन्
यदी तपाईं एसिडिटी को समस्याबाट ग्रसित हुनुन्छ भने सोयाबीनको आटाको रोटी खान आवश्यक हुन्छ । जसले पेटलाई सफा राख्छ एसिडिटी की समस्या हट्छ ।
मानसिक संतुलन ठीक गर्छ
जो तनाव र मानसिक रोगबाट पीष्ति हुन्छन् उनीहरुका लागि सोयाबीन फाइदाजनक हुन्छ । यसकारण मानसिक रोगीले आफ्नो खानपिलनमा सोयाबीन खान आवश्यक छ । जसले दिमाग तेज बनाउँछ ।
सोयाबीनमा प्रोटीनको मात्रा धेरै हुन्छ भन भिटामि B र विटामिन E को मात्र प्रचुर ह्न्छ । जसले शरीरका लागि आवस्यक एमिनो एसिड को कमी पूरी गर्छ । सोयाबीनमा दूध, अण्डा तथा मासुभन्दा धेरै प्रोटीन पाइन्छ ।
हड्डि बलिया हुन्छन्
सोयाबीन मा आइसोफ्लेवोंस नामक रसायन पाइन्छ । जसले विशेष गरेर महिलाको शरीरको हड्डिलाई कमजोर हुनबाट जोगाउँछ ।
सोयाबीन (उमालिएको) २५० ग्राम
कालो चना (उमालिएको) १०० ग्राम
प्याज ७५ ग्राम
गोलभेंडा ९० ग्राम
उमालेको आलु १०० ग्राम
कालो नून एक चम्चा
मरिचको धूलो आधी चम्चा
कागतीको रस डेढ चम्चा
एउटा भाँडोमा सोयाबीन, कालो चना, प्याज, गोलभेंडा, आलु, कालो नून, मरिच र कागतीको रस हालेर मज्जाले मिसाउनुस् ।
सोयाबीन चाट तयार भयो ?
इन्साइक्लोपिडिया अमेरिकाले मसाला तथा जडीबुटीलाई ‘वनस्पतिजन्य उत्पादन, भोजनलाई स्वादिष्ट बनाउने, जसले खानामा सुगन्ध तथा स्वादिलो बनाउन मद्दत गर्छ’भनी परिभाषित गरेको छ ।
हाम्रो भू–बनोट, हावापानी, जलवायु र बृहत् ज्ञानले विभिन्न परिकार बनाउँदा मसलाको प्रयोगबारे हामी निकै जानकार छौँ । अझ औषधिजन्य प्रयोग, अत्तर बनाउन, सौन्दर्य प्रसाधन बनाउन र प्रयोग गर्न पश्चिमी सभ्यताभन्दा निकै जाकार छौँ ।
नेपाल मसला तथा जडीबुटीको भण्डारका रूपमा विश्व प्रसिद्ध छ । जसले चालीस थरीभन्दा बढी मसला उत्पादन गरेको पाइन्छ । तिनीहरूमध्ये मरिच, अलैँची, अदुवा, बेसार, खोर्सानी, ल्वाङ लसुन, केशरी तथा दानाजन्य मसला जस्तै, मेथी, धनिया इत्यादी ।
सुगन्ध अनि स्वाद
सुगन्धित बाफ भएर उड्ने तेलहरू वा अत्यावश्यक तेलहरू धुलो मसालालाई बाफद्वारा तरल पदार्थ निकालिएका एउटा महत्वपूर्ण मसलाजन्य उत्पादन मानिन्छ ।
बाफ भएर उड्ने तेलहरू मसलाको सुगन्ध तथा वासनका लागि तथा स्वादका लागि विख्यात मानिन्छन् । ओलियो रेसिन मसलाहरू अत्यावाश्यक बाफ भएर उड्ने र वाफ भएर नउड्ने मौलिक मसलाका माग जसलाई गल्ने गाल्ने प्रविधिबाट मूल्य तत्व निकालिन्छ । तिनले मौलिक मसलासँग मेलखाने तीतो पीरो स्वाद र सुगन्ध प्रमाणित गर्छन् ।
यद्यपि मसलाहरू विशेषगरी हाम्रा भान्सामा पाक्ने परिकारहरूको सुगन्ध अनि स्वादिष्टता बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । यिनले भोजनमा विशिष्ट स्वाद प्रदान गर्छ । यी मसलामा सबै तीन खाले पोषणको अंशहरू कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन बोसो पनि हुने हुँदा यिनमा पोषणजन्य महत्व पनि हुने गर्दछ ।
यसले शरीरका शक्ति तथा खनिज लवण आपूर्तिमा थप टेवा पुर्याउँछ । यिनीहरू आफैमा शक्ति क्षमता हुन्छ । यसलाई प्राविधिक शब्दमा क्यालोरी क्षमता भनिन्छ ।
उदाहरणका लागि प्रायजसो प्रयोग गरिने मसलाहरू प्रतिसय खानयोग्य मात्रमा सयपत्रीको मसालामा चार सय सैंतीस, जाइफलमा चार सय बहत्तर, ज्वानोमा तीन सय चैंत्तीस, जीराको गेडामा तीन सय छपन्न, बेसारमा तीन सय उनन्चास, मेथीको गेडामा तीन सय तेत्ततीस मिलिग्राम हुने गर्दछन् । जे भए पनि यिनको पोषणजन्य क्षमता सीमाबद्ध मात्र हुन्छ ।
अझ हाम्रा भोजन परिकारमा मसलाको प्रयोग थोरै भए पनि प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँने खालका छन् । तथापि यिनीहरूको अप्रत्यक्ष क्रियाकलाप महत्वहीन पनि छन् । किनकी यिनले भोक जगाउन तथा भोजन रुचाउने मात्रा बढाउँछ ।
मसलाहरूले र्यालका साथै अमाइलेज न्युरामिनिक अम्ल हेकसोसामाइन उत्सर्जन तथा प्रवाहलाई तीव्र पार्ने काम गर्छन् । यसले मुखमा खानेकुरा तथा जीवाणु टासिनबाट बचाउन मद्दत गर्दछ ।
मसलाहरूले र्याललको उत्र्सजनको मात्रा बढाउँछ, जसमा अमाइलेज वा पिटाइलिनको मात्रा बढी हुने हुँदा यिनले पेटमा खाना पचाउनमा सहजीकरण गराउन तथा खानेकुरालाई परिमार्जन गरी कार्बोहाइड्रेट लाइप्रचुर सारयुक्त बनाई बढी सजिलै पच्ने बनाउँछ ।
यसले मुख पाचन प्रणलीमा हल्का एत्तेजित क्रियाकलाप देखाउँछ । अतः मसलाहरूले खाने अभिरुचि बढाउने प्रेरणा दिनुका साथै र्यालजन्य तथा पेटको रसको प्रवाहलाई तीव्र पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
मसलामा धेरैखाले औषधिजन्य गुण भएको दाबी गरिन्छ । विभिन्न खाले औषधि बनाउन प्रयोग गरिन्छ । खासगरी प्राकृतिक उपचार प्रणालीमा प्रयोग हुने, जस्तै आर्युवेदिक तथा युनानी प्रायः जसो पाचन प्रणालीमा जन्मा भएको वायु उत्र्सजक किसिमका हुन्छन् । केही चाहिँ वायुग्रस्त सरक्षण गर्ने र उत्तेजित पार्ने किसिमका हुन्छन् ।
अर्कोतिर केही मसलाहरू अपज अजीर्ण नपच्ने रोग निवारक, सड्न, गल्न, पाक्न नदिने तथा मांसपेसी बटारिन नदिने खालका हुन्छन् । केही मसलाले भने अरू औषधिको निमीठो, तीतो, टर्रो स्वादलाई ढाकछाप गर्ने गर्छन् ।
धेरैखाले मसालामध्ये लसुन सँझना गर्न नसकिने बेलादेखि नै पैतीसभन्दा बढी औषधिजन्य गुणयुक्त प्रभावशाली मसला मानिन्छ । हालैको समयमा आधुनिक औषधि प्रयोग गरी उपचारमा अभ्यासरत स्वास्थ्यकर्मी पनि उच्च रक्तचापग्रस्त बिरामीका लागि निश्चित भरपर्दाे एवम् प्रभावकारी औषधिका रूपमा स्वीकार्न थालेका छन् ।
के तथ्य फेला पारिएको छ भने यसको प्रयोगले बिरामीमा यस्तो एलडीएस कोलेस्ट्रोल तथा ट्राइग्लाइसेराइड मात्रा तह घटाउँछ । साथै संरक्षित गर्ने एचडीएल कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई सामान्यमा राख्न मद्दत गर्दछ ।
सौन्दर्य तथा शरीर रक्षामा मसलाको भूमिका
आजका महँगा अत्तरहरूमा जीरा दालभिनी, ल्वाङ, जाइफल, मेथी, अलैँची जस्ता मसला वा व्युत्तपादित तेलहरूको आवश्यक पर्दछ । सौन्दर्यता र शरीरको रेखदेख एवम् सुरक्षका लागि हामी कहाँ यिनको उपयोग परापूर्वकालदेखि नै प्रचलनमा छ । खाने विविध मसला काँचै प्रशोधन नगरी आज पनि शरीरको रङ सुधार्न अनि राम्रो देखिन प्रयोग गरिन्छ ।
बेसार असाध्यै लोकप्रिय मसलाको श्रेणीमा पर्दछ । यसलाई लेदो बनाएर अनुहार लेप आँत र शरीरमा लगाएमा छालाको रङ परिष्कृत गर्न सकिन्छ । यसका साथै नचाहिँदा रौँ हटाउन पनि प्रयोग गरिन्छ । यसलाई मूल आधार सूत्र लिएर केही व्यापारिक उत्पादकहरूले विभिन्न सौन्र्दय प्रसाधन तथा औषधि एवम् मञ्जन उत्पादन गरी बजारीकारण गरिराखेका छन् ।
त्यसमा मूल अवयव अंश बेसार नै आवश्यक पर्छ । केही अनुसन्धान संस्थानहरूले मसलाको भूमिका सौन्दर्य प्रसाधन तथा औषधि एवम् मञ्जन उत्पादन गरी व्यापार पनि गरेका छन् । यसमा मूल अंश बेसारकै प्रयोग भएको हुन्छ ।
केही अनुसन्धानात्मक संस्थानहरूले मसलाको भूमिका सौन्दर्य प्रसाधनसँग चासो राखी गरेको पाइन्छ । बेसार, मेथी, मरिच, दालचिनी, ल्वाङ, सुपका दाना जस्ता धेरैजसो मसला राम्रो अनुहार रूप रङ देखिन लेपमा मलम तथा लोसन बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यिनीहरूलाई डण्डीफोरको फोका सडाउन, गलाउन, पाक्न नदिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रै भान्सामा यति महत्वपूर्ण सामग्री हुँदा पनि यिनबाट उत्पादन भएका सौन्दर्य प्रसाधन तथा शरीर रक्षाका सामग्री खरिद गर्न भौँतारिएर बजार चाहार्छौँ र चर्को मूल्य तिर्छौं ।
Don't Miss it लगातारको खोकी लागि रहनु राम्राे सङ्केत हाेइन, क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ एक चाेटि पढाैँ
Up Next तपाइलाई रिस कतिको उठ्छ ? रिसले निम्त्याउन सक्छ यस्ता खतरनाक रोगहरु – जानीराखौ
फिचर्ड, भान्छामा औषधी
भान्सामा हम्मेसी नटुट्ने कुरा हो प्याज । प्याज आफैमा तरकारी होइन तर लगभग सबै जसो तरकारीमा प्याज नभइ हुदैन ।…
गर्मी सुरु भएको छ। घाममा डढेर छाला कालो हुनबाट बच्न निकै कठिन समय। चर्को घामले छालामा पर्ने प्रभाव घटाउने वा…